Toa ny samy manana ny valinteny amin’ny fanontaniana : « Inona no mampihena ? » avy isika. Mino ary aho fa samy manana lisitry ny vahaolana amin’izany « olana » izany ny tsirairay. Nefa io fanontaniana io dia miverimberina, indraindray aza im-betsaka ao anatin’ny fiainan’ny vehivavy iray : « Inona no mampihena ? ». Fa maninona ary no mbola mitady vahaolana amin’io « olana » io foana ny vehivavy na dia efa betsaka aza ny vahaolana efa nomena azy ? Sao dia tsy mandaitra akory ary ny vahaolana natolotra azy ?
Ny fomba mandaitra indrindra mba hamahana olana iray ary tsy hiverenany intsony dia ny fandringanana (esorina tsy hisy intsony) ny antony izay mahatonga azy. Noho izany, rehefa tsy misy intsony ny antony nahatonga ny olana, tsy hisy intsony izany ny olana.
Oh : Marary matetika ny apandisitanao. Manapa-kevitra ny handidy anao ny dokotera noho izany.
Fototry ny olana
Mietsika ny apandisita
Didiana, esorina mihitsy ilay mamparary.
Mba hahitana vahaolana tena mandaitra, andao aloha hitady ny anton’ny « olana » : mihangeza na mihamatavy.
Ny antony mahangeza na mampatavy izay hitanareo
Dieny mbola eto amin’ny antony dia hitako fa diso fiheverana ny ankabeazantsika. Izay no antony hitodihantsika amin’ny « vahaolana diso ».
Inona ary ny antony tena mampatavy ?
Marina fa ny olona sasany dia matavy noho ny jenetika, manana ny antsointsika hoe « gênes de gros » izy. Nefa vitsy ireo olona ireo. Tsy afaka ny mihena be intsony ireny olona ireny ka mila mianatra ny manaiky ny vatany. Nefa, misy foana ny indro kely, izany hoe misy foana ny tsy manara-dalàna. Mety tsy ny jenetika akory no nahatonga ny sasany ho ngeza fa ny vokatry ny régimes maro nataony. Ho hitantsika rehefa avy eo izany.
Mba handravonana ny « olana » : mihangeza na matavy, mila tadiavina aloha ny antony mahatonga izany. Avy eo, fongarina tsy hisy intsony ireo antony ireo mba tsy hitrangan’ny « olana » intsony.
Nihevitra avy isika fa ny mahangeza na mampatavy dia :
vokatry ny jenetika na ny vahana : izany hoe tsy misy na inona na inona azo atao amin’izany fa tsy mety hihena intsony ianao ;
vokatry ny fisesefana hanina na fihinanan-kanina tsy ara-pahasalamana : izany hoe ratsy loatra ny fomba fisakafohanana ;
vokatry ny tsy fihetsiketsehana.
Nefa ny tena antony misongadina be indrindra izay mampatavy dia ny fihinanan-kanina nefa tsy noana sy ny tsy fanaovana fanatanjahantena.
Hadihadio ny manjo anao
Mba hahitanao ny misy anao amin'izao, makà fotoana kely hieritreretana sy hamaliana ireto fanontaniana manaraka ireto :
Raha izay no izy, dia mety manana ilay antsoina hoe « gènes de gros » ianao. Nefa mbola mampisalasala ihany.
Tsaroanao ve ny fomba nampatavy anao ?
Raha tadidinao dia tantarao hoe ahoana ny nahatonga izany. Raha tsy tsaroanao dia inona, raha ny eritreritrao, no antony tsy hahatadiavanao an'izany ?
Tsarovy aloha fa tsy hisy olona afaka ny hatavy aorian'ny sakafo (iray) 1 ihany, na andro iray (1) ihany, na herinandro iray (1) ihany. Nila volana maromaro ny nampatavy anao, mila fotoana maro toa izay ihany koa ianao vao mihena.
Inona no antony hihinananao hanina ? Izany hoe : oviana ianao no mihinan-kanina ?
Ny valiny tokana izay azo hekena dia : « rehefa noana ihany ». Amin'io fotoana io ihany no mila hery avy amin'ny sakafo ny vatana. Amin'ny fotoana hafa, lasa mitahiry tavy fotsiny ianao.
Manao fanatanjahan-tena na mikotrana ve ianao ?
Raha tsia ny valiny, fa maninona?
Mety niharan'ny sazy amin'ny alalan'ny kotrana ianao tamin'ny fahazazanao (nanasazy anao tamin'ny faaovana pompes ny ray aman-dreninao na ny mpampianatra anao, ka nahatonga anao tsy tia maizina ny fanatanjahan-tena). Na koa, ny kotrana sasantsasany izay tsy tianao ihany no atao hoe fanatanjahantena ho anao, nefa ny fanatanjahantena dia midadasika be. Na koa aleonao manao zavatra hafa noho ny manao fanatanjahantena.
Mampatavy antsika ny
Izay mamaritra ny habeantsika dieny mbola vao niforona isika
Mihinan-kanina tsy amin'ny hanohanana
Izany hoe mihinan-kanina nefa tsy noana
Noho ny fialàna bala isan-karazany